Resaky ny mpitsimpona akotry : fepetra feno fihetsiketsehana tsy mahavaha olana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fepetra feno fihetsiketsehana tsy mahavaha olana
Fitapitaka sa hamaivanan-doha? Izay iray fanapahan-kevitra miseho toa mivaona avokoa, indraidray aza mifanipaka mihitsy amin’ny tanjona izay voalaza ho tratrarina.
Tamin’ny herinandro lasa iny, ny andro natokana ho fitakiana zo mitovy amin’ny an’ny lehilahy ho an’ny vehivavy. Niseho ho mpitarika sy mpisinkina amin’ny tolona fitakiana izany ireo andefimandrin’ny tompom-pahefana ambony. Fisehosehoana anie izao, kabary fanentanana, fanambarana famirapiratan’ny hoavy, hay va re poakaty sy voankazo lo izay rehetra naloakan’ny vava: ny anio dia anio ao ireo lalàna manitsakitsaka ny zon’ny vehivavy izay tsy no resahana dia ny ampitso no deraderaina. Amin’ny maha olom-pirenena azy dia feno tapany ny vehivavy, mikobana: na kitapo nifonosana aza dia tsy manan-jo feno amin’ny fampitana ny zon’olom-pirenena ho an’ny zanany raha vahiny ny rain’ilay zaza, indrindra moa raha sendra mitondra fahasamponana ilay zaza. Fanavakavahana tsy misy toy izany, firy ireo olona niseho ho londohan’ny mpisorona no nitaky ny fanafoanana izany lalàna tsy manam- pahamendrehana izany?
Mihodina ny maso ka mitopy any amin’ny ady atao amin’ny dahalo. Asa na izany no fomba vaovao, ny tetikady fanatanterahana no aboraka mialoha, voalaza izao fa toerana roa no andefasana ireo andian-tafika voaomana manokana feno hakingana handravarava izay sakantsakana manembatsembana ny lalany. Indrisy anefa ny asan-dahalo tsy mionona amina toerana iray na roa, tsy mitsahatra miampitampita ireo andian’olon-dratsy, sambory hono izy raha azo toy ny fanaon’ny ankizy amin’ny ara-boka.
Raha mivadika ny pejy ka eo amin’ny fanoratana ny fahaterahana ao amin’ny bokim-panjakana no resaka, dia ny vahaolana naroso izao mba hisorohana ny tsy fananan’ny olona aman-tapitrisa kôpia izany hoe tsy maha-olom-pirenena manan-jo dia ny fanaovana ny fanoratana amin’ny alàlan’ny infôrmatika. Aoka rê! Tsy any ny aretina, fa eo amin’ny tsy fahampian’ny olona mavitrika hanefa io adidy io, na noho ny fahasahiranana na noho ny halavirana na koa satria tsy manavanana azy ny fidirana any amin’ny biraom-panjakana izay mbola ahitana risoriso mitampify etsy sy eroa.
Mandany fotoana sy vola aman-karena amina fanidintsidinana fotsiny izany rehetra izany. Vita iny ny fampisehoana tany Ambovombe, toa menaka nahoso-bato anefa tsy mahefa firy amin’ny fanamaivanana ny fahoriana mianjady amin’ny mponina noho ny hanoanana. Tsy hiverenana atao resaka intsony moa ny fampihemorana ny fari-pahaizan’ny mpampianatra noho ity fanipazana adidy any amin’ny mpampianatra Fram ity: fampihemorana lazaina hitondra fisondrotana.